Maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo oo maanta si wada-jira oga hadlay dhacdadii shalay xabsiga weyn ee Gaalkacyo iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay gobolka (Warsi-xaafadeed) – Radio Daljir
Maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo oo maanta si wada-jira oga hadlay dhacdadii shalay xabsiga weyn ee Gaalkacyo iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay gobolka (Warsi-xaafadeed)
Agoosto 13, 2012 4:33 b 0
Gaalkacyo, Aug 13- Gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland? iyo duqa degmada Gaalkacyo oo maanta oo (Warsi-xaafadeed)sida wada-jira ugu qabtay xarunta maamulka gobolka ayaa si kulul oga hadlay weerar ay shalay galab kooxo hubaysan oo burcad-badeed u badan ay ku qaadeen xabsiga weyn ee Gaalkacyo, dhacdadaasi oo uu dhaawac ka soo gaaray kooxahaasi burcaddaa ayay ku tilmaameen fal ay soo abaabuleen kooxo danbiilayaala oo horay dawladdu ay ugu daba jirtay, sidoo kale waxay ka hadleen xaaladaha uu hada ku sugan yahay gobolka ka dib markii dhawaan ciidamo ay soo gaareen.
Duqa degmada Gaalkacyo Col; Siciid Cabdi Faarax oo hadalka kaga? horeeyay ayaa sheegay inuu aad u soo hagaagayo ammaanka gobolka xiligan ka dib markii magaalada ay yimaadeen ciidan ka socda dawlada, duqa ayaa sidoo kale guul ku tilmaamay iska-caabintii ciidanka xabsiga ay shalay ku sameeyeen kooxihii burcada ahaa lagana dhaawacay afar qof, Col; Siciid ayaa ka digay in la weeraro xarumaha dawlada sida saldhigyada iyo xarumaha maamulka wuxuuna tilmaamay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cidii ku kacdo falkaasi gurracan.
Gudoomiyaha Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac oo warsi-xaafadeedkaasi hadalo kooban ka jeediyay ayaa ugu horayn ammaanka gobolka ku tilmaamay inuu hada marayo meel lagu tashan karo? waxaana uu tilmaamay? inay wax badan gobolka ka badaleen ciidanka yimid magaalada, gudoomiyaha ayaa soo hadal qaaday dilalkii qorshaysnaa ee? ka dhacay magaalada iyo uur ku taalada ay ku reebeen bulshada, Tigey ayaa kooxaha weerarka ku qaaday xabsiga inay ahaayeen kooxo horay u afduubtay shaqaale ajanabiya,weeraray xarunta madaxtooyada ee Gaalkacyo iyo falal kale oo ay ka gaysteen gudaha magaalada.
Gudoomiyaha Mudug ee dhinaca Puntland ayaa dhanka kale ciidankii dhawaan ay dawladda u soo dirtay? Gaalkacyo waxaa uu ku tilmaamay ka dhiidhin dawladdu ay ka dhiidhiisay xasilooni darada magaalada balse ay jiraan shakhsiyaad iyo kooxo doonayo inay hagar-daamiyaan hormarka iyo ammaanka bulshada reer Puntland.
Maxamed Yuusuf Jaamac ( Tigey )Mudane Tigey ayaa gaba-gabadii bulshada gobolka dhinacyadooda kala duwan ugu baaqay inay ka shaqeeyaan adkaynta ammaanka iyo kor u qaadista hormarka, xili magaalada maalmahan ay ka soconayeen dhismayaasha waddooyinka caadigaa iyo jidka laamigaaba.
Warsi-xaadeedkan ay maanta warbaahinta u qabteen? gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed yuusuf jaamac iyo duqa Gaalkacyo Col; Siciid cabdi faarax ayaa ku soo beegmaya ka dib markii mudooyinkii danbe uu soo hagaagayay ammaanka Gaalkacyo, inkastoo habeen hore gudaha magaalada lagu dilay dilay nin ganacsadaa mid kalana lagu dhaawacay shalayna la weeraray xabsiga weyn.
Gaalkacyo waxaa labadii bilood ee la soo dhaafay ku sugnaa ciidamo xoogan oo ka yimid gobolada kale ee Puntland kuwaasoo uu horkacayo Taliye ku xigeenka Booliska Puntland Col; Muxiyadin Axmed Muuse kana hawl-galaya guud ahaan magaalada.
Dusgiga sarre ee Al-Najax Boosaso oo usoo baxay tartanka kama dambaysta ( Final)